Diyaaraddii la dhacday ciyaaryahan Emiliano Sala oo la dayactiray mar kalena dib u shaqo bilaabi doonta! – Gool FM
(Nantes) 25 Feb 2019. Diyaaraddii bishii Janaayo Biyaha kanaalka Ingiriiska kula dhacday ciyaaryahan Emiliano Sala ayaa dayactir lagu sameeyay, iyadoo mar kale shaqada billaabaysa waloow shirkadda baarta shilalka dhanka diyaaradaha ee (AAIB) ay sheegtay in aan weli la garanayn sababtii diyaaraddaasi u dhacday.
Sala ayaa ku geeriyooday shilkaasi diyaaradeed 21 bishii Janaayo, waxaana xilligaasi uu ku socday inuu ku biiro kooxdiisa cusub ee Cardiff City oo ku qaadatay lacagtii ugu badneyd ee ay ciyaartooy ku soo iibsadaan.
Meydka Sala ayaa baaritaan dheer kaddib gunta hoose ee biyaha laga soo helay, waxaana loo dhoofiyay oo lagu aasay magaalladii uu ku dhashay ee waddanka Argentina, inkastoo duuliyihii waday diyaaraddaasi ee David Ibbotson weli la la’yahay.
Diyaaraddan yar ee N264DB ee haatan la habeeyay ayaa haysata ruqsad duulimaad (September 2015-September 2021), iyadoo haatanna mar kale dib u shaqo bilaabi doonta.
Edinson Cavani oo Sabtida dib ugu soo laabanaya Paris Saint-Germain